သာကီနှင့် နာဇီ | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
« ရွေးကောက်ပွဲ စက်ဝန်းနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဓမ္မတာ
ရာဇဝင်ကို ဖြတ်သန်းခြင်း ၁ »
သာကီနှင့် နာဇီ	23Jan11
တို့ဗမာကြေညာစာတမ်း အနှစ် ၈၀ ပြည့်အတွက် မဇ္ဈိမ မှာ ရေးခဲ့တာပါ။ ဘဝင်ကျဖို့ခက်တာတွေပါမယ်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူမျိုးစုဆိုင်းဘုတ်နဲ့ပါတီတွေ နေရာရလာတာ၊ တဖက်ကလဲ အာဏာရ စစ်တပ်နဲ့ လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ကုန်တာ၊ “လက်နက်အသင့် ငြိမ်းချမ်းရေး” ဖြစ်နေတာ ဒါတွေကြောင့် ဒီစာကို ပြန်တင်ပါတယ်။ (၁)
လောလောဆယ်ဆယ် မေ ၃ဝ ဒီပဲယင်းနေ့ကပဲ တို့ဗမာကြေညာစာတမ်းက အနှစ် ၈ဝ ပြည့်သွားသည်။ ပါမောက္ခဒေါ်ခင်ရီ၏ ကောနဲလ်တက္ကသိုလ်မှ ထုတ်သော တို့ဗမာလှုပ်ရှားမှုစာအုပ်တွင် ၁၉၈၈ထိ မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းကို သခင်များ ကြီးစိုးကြောင်း သုံးသပ်ထားသည်။ ထို့နောက် အဆက်ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကတိုက်ပွဲများတွင် တို့ဗမာမျိုးချစ် လက္ခဏာသွင်ပြင်ဖြစ်သော တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်နှင့် နိုင်ငံခြားဆန့်ကျင်ရေးတို့ ကြီးစိုးဆဲဟု ကျနော် ဖြည့်စွက် ပြောချင်သည်။ ထိုတို့ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒသည် အစဉ်အလာမြန်မာအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့် ဘာကွာသလဲမေးလာရင် ပိုပြင်းသည်၊ ပိုကြွသည်၊ ဥရောပအမျိုးသားရေးဝါဒပုံစံ လူမျိုးအခြေပြုတိုင်းပြည်စံနစ်ကို ပန္နက်ချခဲ့သည် (တနည်း အနှစ် ၆ဝကျော် ပြည်တွင်းစစ်ကို မီးရှို့ပေးခဲ့သည်) ဟု ဆိုရမည်။ ထိုထက် ဗမာ/မြန်မာဆိုသော အနက်တူစကားနှစ်လုံးကို ကလဖန်ထိုးပီး တိုင်းရင်းသားတွေကို မြန်မာဇာတ်သွင်းဖို့ သခင်/ဦးနု၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းနှင့် တပည့်ကြီးများ မြန်မာအမျိုးသားရေးဝါဒီကြီးများ ဤဝါဒကိုသုံး၍ အနှစ် ၈ဝလုံးလုံး အကွက်ချခဲ့သည်ဟုသာ ယူဆသည်။ မြန်မာပြည်/နိုင်ငံဆိုသည့် စကားရပ်သည် တိုင်းပြည်၏ လူဦးရေ သုံးပုံနှစ်ပုံနှင့် ကျန်တပုံအကြား တကယ့်လောင်စာဖြစ်လာသည်။ “ ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့ပြေ …တို့ဗမာပြေကို တိုင်းရင်းသားအကုန်အစင် တို့ပြေလို့မှတ်ထင်” စသည်ဖြင့် ဝိုင်အမ်ဘီသခင်တင်က စာပြုစပ်ဆိုခဲ့သည့် သီချင်းမှာ မြန်မာအများစုကြား သွေးထိုးပေးနိုင်ခဲ့သော်ငြား အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂရိတ်ဗြိတိန်တို့ကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားအများဆိုင် နိုင်ငံရေးပုံရိပ်တခုဖြစ်အောင် မဆောက်တည်နိုင်ခဲ့ပါ။
မိုက်ကယ်အောင်သွင်က ဦးကုလားရာဇဝင်ကို ကိုးကား၍ ၁၈ရာစု ညောင်ရမ်းခေတ်ကပင် အဝရွှေနန်းကို အခြေပြုပီး မြန်မာနိုင်ငံဟူသော နိုင်ငံရေးအမှတ်သညာတခုပေါ်ထွက်နေပီဟု ရေးဖူးသည်။ ဤသို့ အခိုင်အမာဆိုနိုင်ရန် အုပ်စိုးသူပဒေသရာဇ်နှင့် နီးစပ်ရာ ပညာရှိများပြုစုသည့် စာပေကို ကိုးကားသည်ထက် လက်အောက်ခံ မြန်မာမဟုတ်သော တပါးလူမျိုးများအမြင်၊ မြန်မာကျေးတော်မျိုးတို့၏အသံကိုပဲ ပိုရအောင် နားထောင်သင့်သည် ထင်ပါသည်။ အမှန်မတော့ ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်း နယ်ချဲ့နှင့် နှာခေါင်းချင်းတိုးမိကြချိန်မှ တမ္ပဒီပ သုနာပရန္တစသည့် တိုင်းကြီးများ၏သခင်ဘဝမှသည် မြန်မာဘုရင့်နိုင်ငံဟူပီး ပေါ်ထွက်လာရန် ကြိုးစားခဲ့ရသော အညာပဒေသရာဇ်များသည် မှန်နန်းစသည့် ရာဇဝင်သစ်များရေးပီး မြန်မာမင်းကို ဘုရားနှင့် အမျိုးဆက်ရသည်။ ပုဂံမင်းဆက်အစ ပျူစောထီးဟာ နဂါးမနှင့် နေမင်းသားညားပီး ဥ,ဥရာက ပေါက်သည့်သားဆိုသော ယခင်ရာဇဝင်ဟောင်းများကိုလဲ ဝါဒဖြန့်ပုံစံသစ်အတွက် ငြင်းချက်ထုတ်ရသည်။ သို့သော် နန်းလုပွဲများနှင့် နစ်မွန်းပီး တိုင်းပြည်ကို စံနစ်တကျ အခြေမဖွဲ့နိုင်သော ကုန်းဘောင်မင်းဆက်သည် တတိယအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲတွင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကုလားရန်မှ သာသနာတော်ကို ကာကွယ်ရန်ဟု ဘာသာရေးဘန်းပြပီး လူထုကို စည်းရုံးခဲ့ရသော်လဲ ဆေးချက်က မမီတော့ပေ။ မန္တလေးပျက်ချိန်ထိ ဘုရင်နှင့် ဒေသအကြီးအကဲကို သစ္စာခံမှုမှအပ လူမျိုးနှင့်နိုင်ငံဟု တသီးတခြားမှတ်စွဲမှုမရှိသေးသောကြောင့် ရှေးဦးလက်နက်ကိုင်ထကြွမှုများမှာ ကန်ရေပြင်ကို ခဲပေါက်သကဲ့သို့ ငါးမမိဘဲ (အာဏာဗဟိုချက်ကို မထိပါးနိုင်ဘဲ) နိဂုံးချုပ်ခဲ့ရသည်။ သုဓမ္မာသာသနာပိုင်နှင့်တကွ မင်းစိုးရာဇာအများစုကလဲ ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးအမြစ်တွယ်အောင် အားဖြည့်ထောက်မခဲ့ကြသည်။ ဝိုင်အမ်ဘီအေမှအစ နိုင်ငံရေးခေတ်ဦးအနှစ် ၂ဝ အတွင်း အမျိုးဘာသာသာသနာပညာဟူသော ဝံသာနုအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများမှ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတည်းဟူသော တိုင်းပြည်တွင် ကြီးစိုးနေသည့် အိန္ဒိယနွယ်ဖွားများနှင့် ကွဲပြားသည့် သီးခြားလက္ခဏာကို ပုံဖော်ရန် အားထုတ်သော်လဲ ပဒေသရာဇ်အငွေ့မပြယ်နိုင်ဘဲ အုပ်စိုးသူတိုင်းခြားသားတို့ထံမှ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့် တိုးတက်ဖို့သာ ပဓာနပြုသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဦးဥတ္တမ၏ မကြောက်တရားလှုံ့ဆော်မှု၊ ဝံသာနုဘူးအသင်းများ၊ အရှင်စိုးသိမ်းဂျီစီဘီအေစသည်တို့လောက်သာ ရဲဝံ့မှုတွင် ပြောစမှတ်ရှိလေသည်။ တို့ဗမာကြေညာစာတမ်းထွက်ပီးနောက်မှသာ တိုင်းပြည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာစကားပေါ် အခြေပြုသည့် ဥရောပပုံစံ အမျိုးသားရေးဝါဒ အိန္ဒိယလက်နက်နိုင်ငံအဝင် မြန်မာပြည်နယ်တွင် အခြေတည်ဟု ယူသင့်သည်။ ဤကား တို့ဗမာ၏ လာရာလမ်းဖြစ်သည်။
ပထမ ကုလား-ဗမာအဓိကရုဏ်းပီးပီးချင်း ဖြန့်ချိသည့် တို့ဗမာကြေညာစာတမ်းမှာ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားများနှင့်လူမျိုးခြားများလက်မှ စီးပွားရေးကို ဗမာ့လက်ထဲ ပြန်ရောက်ဖို့၊ လုံးဝလွတ်လပ်ဖို့ကို သံကုန်မြှင့်၍ တောင်းဆိုသည်။ ဗမာဟူသော ရှေးရှေးကထဲက ပြောစကား၊ တို့ဟူသော နေ့စဉ်ပြောစကားရိုးရိုးတို့ကို ပေါင်းစပ်၍“ အို အချင်း အမျိုးသား တို့ဗမာတို့” ဟု သခင်ဘသောင်း ကြွေးကြော်လိုက်ချိန်တွင် အိပ်နေကြသော ဗမာများ နိုးကြားလာပီး နှလုံးသည်းပွတ်များ ဆွဆွခုန်လာသည်ဟု မောင်ထင်က အမှတ်တရစကားဆိုခဲ့သည်။ ဤမှစပီး နစ်ရှေး၏ ပဲ့တင်သံကို ကြားလိုက်ရသလို နာဇီ ဖက်ဆစ်စသည့် လာတော့မည့် လက်ျာစွန်း အမျိုးသားရေးဝါဒကြမ်းများကလဲ စီးပွားပျက်ကပ်နှင့် လယ်သမားသူပုန်ထခါနီး နိုင်ငံရေးသေနေသော မြန်မာပြည်ကို အာဠာဝကဆေးထိုးလိုက်သဖြင့် ရှေ့ လျှောက် တိုင်းရေးပြည်ရေးမှာ ဆူပွက်လာတော့သည်။ ခြစားနေသော သတ္တိကြောင် နိုင်ငံရေးလက်ဟောင်းကြီးများလက်မှ နိုင်ငံရေးသြဇာသည် လူငယ်လူဆူလေးများလက်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာ၏။ ပဒေသရာဇ်သံ ဓနရှင်သံ ပညာတတ်သံပါလှသော လွှတ်တော်နှင့် ကလပ်ထဲက လူ့မလိုင်နိုင်ငံရေးကစားပွဲများထက် လမ်းပေါ်နိုင်ငံရေးဟု ဆိုကြမည့် သပိတ်တွေ အစည်းအရုံးတွေ ကျောမွဲတွေဘက် နိုင်ငံရေးရေချိန်က လှည့်လာသည်။ ထို့နောက် အားလုံးသိသည့်အတိုင်း ကမ္ဘာစစ်အမှီပြု၍ ဗမာပိုင်စစ်တပ်ဖွဲ့ကာ လွတ်လပ်ရေးလမ်းစပေါ်ရောက်ခဲ့သည်။
သခင်ဘသောင်းမှာ တို့ဗမာတို့၏ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သော်ငြား မစ္စတာမောင်မှိုင်းကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးဝါရင့် မျိုးချစ်သတင်းစာဆရာ ပညာရှင်ကြီး သခင်ဘွဲ့ခံချိန်မှစပီး အစည်းအရုံးသိက္ခာပိုကြီးလာသည်။ အောင်ဆန်း၊ ဗဟိန်း၊ သန်းထွန်း၊ စိုးစသည့် ကောလိပ်ကျောင်းနှင့် ပြင်ပက လက်ဝဲယိမ်းလူငယ်တွေ ဝင်လာချိန်တွင် ကုလားမုန်းတို့ဗမာဝါဒမှသည် ဘုံဝါဒလမ်းကြောင်းပေါ်တက်လာသည်။ မှိုင်းဋီကာနှင့် နဂါးနီစာအုပ်လေးများက စစ်ပီးခေတ်မှ ယနေ့ထိ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကို (လက်ဝဲသံပျော့သွားသည်မှအပ) ရိုက်ခတ်ဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော် ဖာနီဗယ် ရေးဖူးသလို မြန်မာလက်ဝဲသမားဟူသည် အမျိုးသားရေးဝါဒီများသာဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်မှိုင်းတွင် ပဒေသရာဇ်အစွဲမပျောက်သကဲ့သို့ ဂန္ဓီစိန်ဟု တွင်ခဲ့သော သခင်ဗစိန်မှ ဖက်ဆစ်နာဇီကို အားကျသည့် စကားတွေပြောလာပီး ဂျပန်နှင့် ပူးပေါင်းရန်လိုလားလာခဲ့သည်။ လူကြီးလူငယ် ပညာမဲ့ ပညာတတ် လက်ျာ လက်ဝဲပဋိပက္ခမှာ အပေါ်ယံပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာမှ အစပြုပီး အသင်းနှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ရသည်။ လက်ျာခြမ်း ဗစိန်-ထွန်းအုပ်ဂိုဏ်းမှာ ဂျပန်ခေတ်တွင် ဗမော်-အောင်ဆန်း နိုင်ငံရေးသဟာယကို မယှဉ်နိုင်သဖြင့် (တပ်ထဲတွင်တော့ သူတို့တပည့် ဗိုလ်နေဝင်းက တစင်ထောင်နိုင်လာသည်) မဟာမိတ်အဝင်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကို လူသတ်မှုနှင့်တရားစွဲဖို့ နယ်ချဲ့အကြံအစည်ကို ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သခင်ထွန်းအုပ်က သက်သေခံပေးသည်ထိ အရုပ်ဆိုးခဲ့ရသည်။ ဆင်းမလားပြန် ဆာပေါ်ထွန်း၏ အင်္ဂလိပ်နှင့် အလွမ်းသင့်သည့် အစိုးရနှင့် ဘုရင်ခံခန့်လွှတ်တော်တွင်လဲ သခင်ထွန်းအုပ်တို့တသိုက်ပါခဲ့ကြသည် (သခင်ထွန်းအုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အကို ဦးအောင်သန်းမှာ မယားညီအကိုတည်း)။ နောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအစိုးရတွင် ပါလာသည့် သခင်ဗစိန်မှာကား ဆရာမှိုင်းကြီး စာချိုးအတိုင်း ဂွကလိန်လုပ်လေရာ အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်ချုပ်ပီးနောက် ဂဠုန်စော-ဒေါက်တာဗမော်တို့နှင့်အတူ စော-စိန်-မော်ဂိုဏ်းဖွဲ့ရာမှ နိုင်ငံရေးသေသွားတော့သည်။ တဖက်က မှိုင်း-အောင်ဆန်းဂိုဏ်းမှာလဲ ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်အကွဲအပြဲများ စစ်ပွဲ အာဏာလုပွဲ နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုများဖြင့် လက်ဝဲမျိုးချစ်လမ်းကြောင်းကို အတော်ကျွံသွားရာ ၁၉၈၈မှ ယခုထိ ပြန်ရုန်းလို့ မရပြန်သေး။
ဒီပဲယင်းအဓိကရုဏ်းအဓိကတရားလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတရားထောင်ချခံရမှုကမလွတ်သေးချိန်၊ ရွေးကောက်ပွဲအမည်ခံ ဒီမိုကရေစီသင်းကွပ်ပွဲတောခြောက်သံတွေ ညံနေခိုက် ပြန်စဉ်းစားလျှင် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကို တုတ်နှင့်ရိုက်သည့် ပုသိမ်က သခင်အမည်ခံ ဘုန်းကြီးလူထွက်ကို သတိရသည်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံး ၂ ခြမ်းမကွဲခင် ရွှေတိဂုံဇရပ်တဆောင်တွင် နောက်ဆုံးစေ့စပ်ကြစဉ်က စားပွဲအောက် သေတ္တာထဲတွင် တုတ်ဓားလက်နက်တွေ ဝှက်ထားတာ ကံကြီးလွန်း၍ မည်သူမှ ကိုယ်ထိလက်ရောက် မဖြစ်လိုက်ဆိုသည့် ဒေါ်ခင်ရီ့စာအုပ်ပါ အကြောင်းရပ်လေးကိုလဲ အောက်မေ့သည်။ ပါလီမန်ခေတ်က ပဒေသရာဇ်အသွင် ဘုန်းကြီးခဲ့သည့် လယ်ဝေးသခင်ကြည်ရှိန်လို လူသတ်ဘုရင် ဖဆပလအမတ်များ၏ မားဖီးယားနိုင်ငံရေးလောကကိုလဲ သတိရသေးသည်။ ယခုတလော လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်ပါ ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း စစ်အရာရှိဟောင်းတယောက် ရေးသည့် လွတ်လပ်ရေးမှတ်တမ်းတွေထဲက စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေ အတော်များများမှာ သခင်နိုင်ငံရေးသမား၊ သခင်လက်ပါးစေများဘဝနှင့် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးနယ်ထဲ ဝင်လာပုံ၊ ထိုမှ လွတ်လပ်ရေးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးအုပ်စုချင်း လက်နက်ကိုင်အပြုတ်ဖြုတ်ပွဲများတွင် နိုင်မည့်မြင်းစီးမိပီး စစ်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ ဖြစ်လာကြပုံကို ဖတ်ရင်း အရင်းစစ်တော့ အားလုံးတို့ဗမာတွေပဲ၊ ကမ္ဘာမကြေအောင် အညှိုးကြီးကြတာ သခင်ရှုမောင်တို့ သခင်ဖြိုးတုပ်တွေ ဖြစ်ကုန်တာ အထက်တန်းစိတ်မမွေးနိုင်ကြလို့ပါလားဟု သံဝေဂယူမိတော့သည်။
၁၉၄၁ ဇန်နဝါရီတွင် ကျင်းပသော ဗမာပြည်လုံးဆိုင်ရာ ဗမာတိုင်းရင်းသားများ ပြေးခုန်ကစားပွဲကြီးတွင် တို့ကရင်လို့ အားပေးသံကို တိုင်းရင်းသားသွေးခွဲစကားဟု စွပ်စွဲသော တို့ဗမာအာဘော်ဟု ပြောနိုင်သည့် စနေ နဂါးနီဂျာနယ်ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရင်း ဒီစကားမျိုးတွေ ဒီကထဲက ပြောတာကိုးဟု ပြုံးမိတော့သည်။ တို့ဗမာ တို့ဗမာဆိုပီး တိုင်းပြည်တွင် ဆယ်နှစ်ကျော် နိုင်ငံရေးသွေးထိုးပေးခဲ့ခြင်းအကျိုးဆက်ကြောင့် တခြားလူမျိုးများကလဲ သီးခြားအမျိုးသားရေးလက္ခဏာဆောင်လာသည်ကို ငြူစူသကဲ့သို့ ရှိလှသည်။ တခါဖူးမှ မစုစည်းမိဖူးသည့် ဒတ်ခ်ျအိန္ဒိယကျွန်းစုများကို အင်ဒိုနီးရှားဟု စစ်ပီးခေတ်တွင် ပေါ်ထွက်လာစေသည့် ဆူကာနိုလို အားထုတ်မှုမျိုး၊ ဘုရင်ကိုးကွယ်မှု၊ ဘာသာရေး၊ ဘာသာစကားတူညီမှုကို အခြေခံသော ထိုင်းအမျိုးသားရေး သွေးသစ်လောင်းမှုမျိုး ဗြိတိသျှမြန်မာပြည်တွင် မပေါ်ဖူးခဲ့ဘဲ စစ်ပီး တနှစ် နှစ်နှစ်အတွင်း ကံရာဇာငယ် ဘုရားတည်နည်းနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးကို ချွေးသိပ်စေ့စပ်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ စစ်မီးများမှာ မျိုးဖြုတ်စစ်ပွဲဟု စွပ်စွဲခံရသည်ထိ တောက်လောင်နေဆဲ။ တို့ဗမာမျိုးချစ်ဝါဒကို ထောက်ခံသည့် မြန်မာမဟုတ်သော အိန္ဒိယနွယ်ဖွား၊ တရုတ်ကပြား တိုင်းရင်းသားသခင်များ ရှိခဲ့သော်ငြား စစ်အတွင်း ဘီအိုင်အေရာဇဝတ်မှုများမှအစ သောင်းကျန်းမှုနှိမ်နင်းရေးကာလ ကရင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့် စစ်မြေပြင်ဆက်ဆံရေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်အရ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား၊ တရုတ်ပိုင် စီးပွားရေးများ ထိန်းချုပ်မှု၊ အတင်းအကျပ်ပြန်ပို့မှုများအလယ် ရှိသမျှတိုင်းရင်းသားအားလုံးကို နယ်ချဲ့လက်ပါးစေစာရင်းသွင်းကာ ဦးချိုးချင်သည့် မြန်မာစွဲဝါဒအဆုံး နိုင်ငံတော် သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုများက တို့ဗမာဝါဒကို မြန်မာကြီးစိုးရေးဝါဒအဖြစ် နာမည်ဖျက်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဆိုသည်ထက် စစ်ကြီးပီးစ မဟာဆွေ၏ “မယ်တို့ပြည်မောင်တို့ပြည်”ဝတ္ထုထဲက အမျိုးသားဓနရှင်စစ်နိုင်ငံကြီးပုံစံမျိုးဘက် ယခုနေပြည်တော်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းက တာစူနေသည်။ သိဒ္ဓိမပေါက်ဘဲ ဒိဋ္ဌိမြောက်နေသူများက ယခုပင် အဏုမြူငန်းဖမ်းနေကြပေပီတကား။
နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိစ္စတွေ၊ တိုင်းရင်းသားဆိုင်းဘုတ်တပ်ပါတီတွေနှင့် နိုင်ငံရေးစစ်ရေး တိမ်တောင်တွေ ထူနေပြန်ပီ။ မြန်မာပြည်ဆိုသည်မှာ မြန်မာ(ဗမာ)များ၏ လက်နက်နိုင်ငံလော၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၏ ခွင့်တူညီမျှသော ပြည်ထောင်စုလော။ တိုင်းပြည်အဝှန်းကို တို့အိမ်တို့ယာမှတ်ကာ လူတစုက ချယ်လှယ်အမြတ်ထုတ်နေမှုများ ဘယ်အချိန်ဆုံးမည်နည်း။ လူမျိုးရေးဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်၍ နိုင်ငံရေးလုပ်သည့် ခေတ်စံနစ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ပြည်ဖုံးကားချကြပါစို့။ Share this:ShareFacebookPrintEmailTwitterLike this:Like Loading...
Filed under: anniversaries, history, nationalism, politics, recycled	|2Comments	2 Responses to “သာကီနှင့် နာဇီ”	Feed for this Entry
ဆြာကြီးတော on January 28, 2011 said:
သိပ်မကြာသေးခင်ပချိန်ကပဲ… မောင်ကျောက်တိုင်ရဲ့ ရတနာပံခြေတ်ကျွန်နိဒါန်း ပြန်ထွက်လာခဲ့သေးတယ်။ တတိယအကြိမ်ဆိုပေမယ့် ဖတ်လြိ့အဆင်ပြေနေတုန်းပါ။
reader on January 30, 2011 said:
Ko Bo Bo,
I read and follows the articles you’ve written all over the net and in printed media some times ago in Burma. I do not know you personally or vice versa.
Burma,needsascholar like you. I also do not know your political views and standings, but as stated above our land is suffered for how long that I wishafellow like five,ten,hundred,thousand,..,….of you,in any given field,are precious assets.
Not for us but for those who yet to be born. Regards,
Reply	« ရွေးကောက်ပွဲ စက်ဝန်းနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဓမ္မတာ